အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သတိပေးနည်း ၁၀ မျိုး - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သတိပေးနည်း ၁၀ မျိုး
Posted by Betty on February 6, 2015 at 17:33 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ warning ခေါ် သတိပေးချက်တွေ နေရာအနှံ့ ရှိပါတယ်။ “သတိ၊ ခွေးကိုက်တတ်သည်။” “ကွမ်းတံတွေးမထွေးရ။” “ချော်လဲတတ်သည်။” စသည်ဖြင့် သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်တွေလိုမျိုး အပြင် သတင်းစာတွေထဲမှာ ဥပဒေအကြောင်းရ သတိပေး စာရှည်လိုမျိုးတွေ လည်းရှိတတ်ပါသည်။ ယုတ်စွအဆုံး ကားဟွန်းတီးတာ၊ စက်ဘီး ဘဲလ်တီးတာတွေတောင် အသံနဲ့ warning ပေးတာတွေ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျား။ ဆိုလိုတာကတော့ လူတွေဟာ နေ့စဉ်တစ်ခုခုကြောင့် အချင်းချင်း နေ့စဉ် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ သတိပေးနေကြတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ စကားနဲ့ သတိပေးတာကို ဒီကနေ့ လေ့လာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ အင်္ဂလိပ်လိုသတိပေးတဲ့နည်း ၁၀ မျိုးကိုဗဟုသုတရစေဖို့ အသုံးပြုတဲ့ situation အခြေအနေအလိုက် ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ Take care
“Take care on the roads. They are really icy.”
ဒီစကားကိုတော့ ကားမောင်းပြီးသွားမယ့်သူကိုလမ်းမှာနှင်းတွေဖုံးနေလို့ သတိပေးပြီးပြောတာပါ။ “icy” နေရာမှာ “slippery” (ချောလို့) ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါက အထူးသဖြင့် လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ "good bye" နဲ့ တွဲပြောတာပါ။
၂။ Mind how you go
ဒါကတော့ “သတိထားသွားနော်” လို့ ပြောတာပါ။ အခုလို ကားတွေရှုပ်တဲ့ခေတ်မှာ ကားနဲ့ ဘဲသွားသွား၊ ခြေလျှင်ဘဲသွားသွား သတိရှိနေမှ တော်ကာကျမှာမဟုတ်လား။ ဒါကိုလည်းလမ်းခွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ “good bye” နဲ့ တွဲပြောတယ်။
ရုတ်တရက် အန္တာရာယ် သတိပေးတဲ့အခါ
ရုတ်တရက် အန္တာရာယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပြောရတယ်။
၃။ Look out!
၄။ Watch out!
ကွဲနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရွှေ့ပြောင်း သယ်ယူတဲ့အခါ သယ်တဲ့ သူတွေကို ပစ္စည်းတွေ မကွဲမရှအောင် သတိရှိရှိနဲ့ သယ်ယူဖို့ ဒီလိုပြောပြီးတော့လည်း သတိပေးလို့ ရပါတယ်။
၅။ Easy does it
“Ok, you’re almost there, easy does it. That’s great. Thank you so much for helping me move the sofa.” ( “ဖြေးဖြေးလုပ်…..ဖြေးဖြေးလုပ်”ဟုတ်ပြီပေါ့။)
“Steady! Are you sure you don’t want some help carrying your bags?” (“ဖြေးဖြေး…. ဖြေးဖြေး”)
တစ်ချို့သူတွေက အရမ်း အရဲစွန့်လွန်းရင်လဲ ကျွန်တော်တို့ သတိပေးရပါတယ်။ အရမ်း အရဲစွန့်တဲ့ သူတွေကို “risk junkies” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၇။ Better safe than sorry
"You should packacouple of torches and some blankets for your journey. Better safe than sorry". (ဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ်။ "it’s better to be safe than sorry.")
၈။ You can’t be too careful
“I’ve locked all the doors and windows and padlocked the gate. You can’t be too careful these days.” (သတိဆိုတာပိုသည်မရှိ။)
၉။ Be careful
“Are you going to walk through the park at this hour? Well, be careful. You never know who’s lurking in the park.” (သတိထားနော်။)
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ notice တွေမှာ အများဆုံး တွေ့ရတတ်တဲ့ အဓိက စကားလုံးကိုဖေါ်ပြရရင်တော့…
အပေါ်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ သတိပေးစကားတွေ အပြင် နောက်ထပ်လည်း အများကြီးရှိနိင်ပါတယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူအံဝင်အောင် သုံးနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ဖို့တော့ သတိ ပေးလိုက်မယ်နော်။
Englishwithatwist.com မှ Shanti ရဲ့ “10 ways to say to be careful” ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ warning ချေါ သတိပေးခကျြတှေ နရောအနှံ့ ရှိပါတယျ။ “သတိ၊ ခှေးကိုကျတတျသညျ။” “ကှမျးတံတှေးမထှေးရ။” “ခြျောလဲတတျသညျ။” စသညျဖွငျ့ သတိပေး ဆိုငျးဘုတျတှလေိုမြိုး အပွငျ သတငျးစာတှထေဲမှာ ဥပဒအေကွောငျးရ သတိပေး စာရှညျလိုမြိုးတှေ လညျးရှိတတျပါသညျ။ ယုတျစှအဆုံး ကားဟှနျးတီးတာ၊ စကျဘီး ဘဲလျတီးတာတှတေောငျ အသံနဲ့ warning ပေးတာတှေ မဟုတျပါလားခငျဗြား။ ဆိုလိုတာကတော့ လူတှဟော နစေ့ဉျတဈခုခုကွောငျ့ အခငျြးခငျြး နစေ့ဉျ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ သတိပေးနကွေတယျပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ စကားနဲ့ သတိပေးတာကို ဒီကနေ့ လလေ့ာ ကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။ အင်ျဂလိပျလိုသတိပေးတဲ့နညျး ၁၀ မြိုးကိုဗဟုသုတရစဖေို့ အသုံးပွုတဲ့ situation အခွအေနအေလိုကျ ဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
ဒီစကားကိုတော့ ကားမောငျးပွီးသှားမယျ့သူကိုလမျးမှာနှငျးတှဖေုံးနလေို့ သတိပေးပွီးပွောတာပါ။ “icy” နရောမှာ “slippery” (ခြောလို့) ဆိုပွီးပွောလို့ရပါတယျ။ ဒါက အထူးသဖွငျ့ လမျးခှဲနှုတျဆကျတဲ့အခါ "good bye" နဲ့ တှဲပွောတာပါ။
ဒါကတော့ “သတိထားသှားနျော” လို့ ပွောတာပါ။ အခုလို ကားတှရှေုပျတဲ့ခတျေမှာ ကားနဲ့ ဘဲသှားသှား၊ ခွလြှေငျဘဲသှားသှား သတိရှိနမှေ တျောကာကမြှာမဟုတျလား။ ဒါကိုလညျးလမျးခှဲနှုတျဆကျတဲ့အခါ “good bye” နဲ့ တှဲပွောတယျ။
ရုတျတရကျ အန်တာရာယျ သတိပေးတဲ့အခါ
ရုတျတရကျ အန်တာရာယျဖွဈတော့မယျဆိုရငျ ဒီလိုပွောရတယျ။
ကှဲနိုငျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ရှပွေ့ောငျး သယျယူတဲ့အခါ သယျတဲ့ သူတှကေို ပစ်စညျးတှေ မကှဲမရှအောငျ သတိရှိရှိနဲ့ သယျယူဖို့ ဒီလိုပွောပွီးတော့လညျး သတိပေးလို့ ရပါတယျ။
“Ok, you’re almost there, easy does it. That’s great. Thank you so much for helping me move the sofa.” ( “ဖွေးဖွေးလုပျ…..ဖွေးဖွေးလုပျ”ဟုတျပွီပေါ့။)
“Steady! Are you sure you don’t want some help carrying your bags?” (“ဖွေးဖွေး…. ဖွေးဖွေး”)
တဈခြို့သူတှကေ အရမျး အရဲစှနျ့လှနျးရငျလဲ ကြှနျတျောတို့ သတိပေးရပါတယျ။ အရမျး အရဲစှနျ့တဲ့ သူတှကေို “risk junkies” လို့ ချေါပါတယျ။
"You should packacouple of torches and some blankets for your journey. Better safe than sorry". (ဒီလိုလဲပွောလို့ရတယျ။ "it’s better to be safe than sorry.")
“I’ve locked all the doors and windows and padlocked the gate. You can’t be too careful these days.” (သတိဆိုတာပိုသညျမရှိ။)
“Are you going to walk through the park at this hour? Well, be careful. You never know who’s lurking in the park.” (သတိထားနျော။)
နောကျဆုံးအနနေဲ့ notice တှမှော အမြားဆုံး တှရေ့တတျတဲ့ အဓိက စကားလုံးကိုဖျေါပွရရငျတော့…
အပျေါမှာဖျေါပွခဲ့တဲ့ သတိပေးစကားတှေ အပွငျ နောကျထပျလညျး အမြားကွီးရှိနိငျပါတယျ။ သူ့နရောနဲ့သူအံဝငျအောငျ သုံးနိုငျအောငျ လကေ့ငျြ့ဖို့တော့ သတိ ပေးလိုကျမယျနျော။
Englishwithatwist.com မှ Shanti ရဲ့ “10 ways to say to be careful” ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Niniwin Shein on February 7, 2015 at 12:13
Permalink Reply by Tin Aung Zaw on February 7, 2015 at 17:08
Permalink Reply by lay pya on February 7, 2015 at 23:07
Permalink Reply by Shwe Zin on February 9, 2015 at 12:27
Permalink Reply by Sam Nang Lagaw on February 9, 2015 at 12:39
Permalink Reply by moonsweet hsel on February 9, 2015 at 13:23
Permalink Reply by Nyan Htet Kyaw on February 9, 2015 at 14:09
Permalink Reply by zaw myo aung on February 9, 2015 at 17:26
Good.I try as you say.
Permalink Reply by mayri on February 9, 2015 at 18:10
Permalink Reply by Ti Ti Aung on February 9, 2015 at 20:29
Permalink Reply by chitko on February 9, 2015 at 23:35
Permalink Reply by Ko Nyunt on February 10, 2015 at 3:37
words are useful. Thanks